Ajụjụ Atọ Gbanwere Ndụ M | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Doris Eldred kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1949
NDỤ M BIRI: Ọ NA-AGỤSI M IKE ỊMA EZIGBO IHE MMADỤ KWESỊRỊ IJI NDỤ YA MEE
Etoro m n’Ankram bụ́ otu obere obodo dị n’ebe ugwu Niu Yọk dị n’Amerịka. Ọtụtụ ndị obodo a na-akpa ehi. Ehi dị n’obodo a karịdịrị mmadụ ole bi na ya.
E nwere naanị otu chọọchị n’obodo a. Ọ bụ ya ka ndị ezinụlọ anyị niile na-ekpe. N’ụtụtụ Sọnde ọ bụla, papa nnukwu m na-ehichara m akpụkpọ ụkwụ m ga-eyi aga Sọnde Skul. M na-eyirizi ya ma were obere Baịbụl mama nnukwu m nyere m gawa. Mụ na ụmụnne m si na nwata mụta ịna-arụsị ọrụ ike, ịna-asọpụrụ ndị ọzọ, ịna-enyere ndị ọzọ aka na ịna-ekele onye meere anyị ihe ọma.
Mgbe m tolitere, agara m biri ebe ọzọ ma mechaa na-akụzi nkụzi ebe ahụ. O nwere ọtụtụ ihe na-agbagwoju m anya gbasara Chineke nakwa gbasara ndụ a anyị dị. Ụbụrụ na-aghọ ụfọdụ n’ime ụmụ akwụkwọ m nkọ. Ma, e nwekwara ndị nke ụbụrụ na-anaghị aghọcha nkọ n’agbanyeghị na ha na-agụsi akwụkwọ ike. E nwere ndị nke nwere nkwarụ, nwee ndị na-enweghị. Ọ nọ na-adị m ka ihe a ọ̀ bụ mmegbu. Mgbe ụfọdụ, ndị mụrụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ụbụrụ na-anaghị aghọcha nkọ na ndị nke mụrụ ndị nwere nkwarụ na-ekwu na “Ọ bụ otú Chukwu si chọọ ya.” Ọ na-eju m anya otú Chineke si kwe ka ụmụaka ụfọdụ buru ụdị nsogbu ndị a pụta ụwa. A sịdị kwuwe, ụmụaka ndị a enweghị ihe ọjọọ ha mere.
Ihe ọzọ na-echekwa m uche bụ ezigbo ihe m ga-eji ndụ m mee. Ọ na-adị m ka o nwebeghị ezigbo ihe m jirila ndụ m mee. A mụrụ m n’ezinụlọ e ji ama atụ, agara m ụlọ akwụkwọ ndị bụ́ ịgbà, ana m arụkwa ọrụ na-atọ m ezigbo ụtọ. Ma ọ ka dịkwa m ka ọ dịbeghị ezigbo ihe m ji ndụ m mee. M sịdị ka m metụkwuo, ihe ọzọ m nwere ike ime bụ ịlụ di, mụọ ụmụ, na-arụ ọrụ m ruo mgbe m ga-ala ezumike nká, ụmụ m akpọgazie m n’ebe a na-elekọta ndị agadi. M nọ na-eche ma ò nwere ihe ọzọ ka mma m kwesịrị iji ndụ m mee.
E nwere otu afọ mụ na ụfọdụ ndị nkụzi ibe m gara njem nlere anya na Yurop n’oge ọkọchị. Anyị gara hụ nnukwu chọọchị a na-akpọ Westminsta Abi, na nke a na-akpọ Nọtrọ-Dam de Pari, gaakwa na Vatikan bụ́ ebe poopu bi. Anyị gakwara hụ ọtụtụ obere chọọchị ndị ọzọ dị na Yurop. Ebe nke ọ bụla anyị rutere, m na-ajụ ndị anyị hụrụ ajụjụ ndị na-echu m ụra. Mgbe m lọtara ebe m bi na Slotsbọg dị na Niu Yọk, m gara n’ọtụtụ chọọchị jụọkwa ha ajụjụ ndị ahụ na-echu m ụra. Ma, o nweghị ndị nke zara m ihe juru m afọ.
Otu ụbọchị, otu nwa akwụkwọ m dị afọ iri na abụọ bịakwutere m jụọ m ma m̀ ma na ya bụ Onyeàmà Jehova, mụ asị ya ee. Ya ajụọ m ma m̀ ga-achọ ịmatakwu gbasara Ndịàmà Jehova, mụ asịkwa ya ee. Ya ajụzie m ebe m bi, mụ agwa ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka mụ na ya matara na anyị gbara agbata obi. Amaghị m na ajụjụ atọ ahụ ọ jụrụ m ga-agbanwe ndụ m ruo mgbe ebighị ebi.
Abalị ole na ole mụ na ya kwurịtachara ihe ahụ, ọ gbaara ígwè ya bịa n’ụlọ m, mụ na ya ebido ịmụ Baịbụl. Ajụrụ m ya ajụjụ ndị ahụ m jụrụla ọtụtụ ndị isi okpukpe. O meghị ka ha. O gosiri m azịza ajụjụ ndị ahụ na Baịbụl m.
Ihe ndị a m mụtara na Baịbụl mere m ezigbo obi ụtọ, meekwa ka afọ ju m. Ihe m gụtara na 1 Jọn 5:19 metụrụ m n’ahụ́. Ebe ahụ sị na “ụwa dum dị n’aka ajọ onye ahụ.” Ahụ́ bịara ruo m ala mgbe m matara na ọ bụghị Chineke na-akpata ihe ọjọọ ndị na-eme taa, kama na ọ bụ Setan, nakwa na Chineke ga-emezi ihe niile n’ọdịnihu. (Mkpughe 21:3, 4) M bịara chọpụta na a kọwaara mmadụ ihe dị na Baịbụl nke ọma, onye ahụ ga-aghọta na Baịbụl na-ekwu eziokwu. Ihe mere m ji kwe ka mụ na nwa ahụ dị afọ iri na abụọ na-amụ Baịbụl bụ na ama m na ihe m na-amụta bụ eziokwu.
Ma, ihe ọzọ m chọrọ ịmata bụ ma Ndịàmà Jehova hà na-emekwa ihe ndị ha na-akụzi. Dị ka ihe atụ, nwatakịrị nwaanyị ahụ gwara m na ezigbo Ndị Kraịst na-enwere ndị ọzọ ndidi, na-enwekwa obiọma. (Ndị Galeshia 5:22, 23) M kpebiri na m ga-ele ma nwa a ọ̀ na-emekwa ihe ndị a ọ sị na ha na-eme. Otu ụbọchị, m kpachaara anya lọta mgbe oge mụ na ya kwesịrị iji ebido ịmụ ihe gaferela ka m mara ma ọ̀ ka ga na-eche m, nakwa ma ọ̀ ga-ewewe iwe na mụ abịaghị n’oge. Mgbe m nyaara ụgbọala m bata, m hụrụ ya ka ọ nọ n’ihu ụlọ m na-eche m. Ọ gbaara ọsọ ozugbo bịa, sị m: “Achọọdịla m ịlawa gaa gwa mama m ka anyị kpọọ ndị ụlọ ọgwụ na ndị uwe ojii ka anyị mara ma ò nwere ihe mere gị n’ihi na ị na-abịakarị n’oge. Ụjọ tụwara m.”
O nwekwara ụbọchị m jụrụ ya ajụjụ m ma na ọ ga-esiri obere nwa ha ka ya ike ịza. Achọrọ m ịma ma ọ̀ ga-aza m ihe ọ bụla batara ya n’isi. Mgbe m jụrụ ya ajụjụ ahụ, o lere m anya, sị m na ajụjụ ahụ siri ike, mana ya ga-edetu ya n’akwụkwọ ma jụọ ya ndị mụrụ ya. Ụbọchị ọzọ ọ bịara ka anyị mụọ ihe, o wetaara m Ụlọ Nche zara ajụjụ ahụ m jụrụ ya. Akwụkwọ Ndịàmà Jehova bipụtara e ji amụ Baịbụl zakwara m ajụjụ ndị ọzọ niile m nọ na-ajụ kemgbe. Ọ bụ ihe a mere m ji bido nwewe mmasị n’ebe Ndịàmà Jehova nọ. Mụ na nwata nwaanyị ahụ nọgidere na-amụ ihe. Mgbe otu afọ gara, emere m baptizim ma ghọọ Onyeàmà Jehova. *
Mgbe m mechara mata azịza ajụjụ ndị ahụ na-echu m ụra, ọ bịara na-agụsi m ike ịkọrọ ya ndị ọzọ. (Matiu 12:35) Ná mmalite, ndị ụlọ anyị achọghị ịnụ ozi ọma m na-ezi ha. Ma, ka oge na-aga, ha gbanwere. Obere oge tupu mama m anwụọ, o bidoro mụwa Baịbụl. O meghị baptizim tupu ya anwụọ. Ma, ama m na o kpebiela ife Jehova.
N’afọ 1978, alụrụ m di. Aha di m bụ Elias Kazan, ọ bụkwa Onyeàmà Jehova. N’afọ 1981, a kpọrọ anyị ka anyị bịa jewe ozi na Betel dị n’Amerịka. * Ọ dị mwute na naanị afọ anọ anyị jere ozi n’ebe ahụ, di m nwụrụ. N’agbanyeghị ọnwụ di m, anọgidere m na-eje ozi na Betel. O nyeere m aka ịna-ewepụtụ obi n’ọnwụ di m, nyekwara m aka idi ya.
N’afọ 2006, alụrụ m di ọzọ. Aha onye nke a bụ Richard Eldred. Ọ na-ejekwa ozi na Betel. Anyị abụọ ka na-eje ozi na Betel. Ịmata eziokwu banyere Chineke emeela ka m nwee ezigbo ihe m ji ndụ m eme. Obi dịkwa m ụtọ na amatala m azịza ajụjụ ndị ahụ na-echu m ụra. Ma, ihe mere ka ihe a niile kwe omume bụ ajụjụ atọ ahụ nwata nwaanyị ahụ jụrụ m.
^ para. 16 Nwata nwaanyị a na ụmụnne ya mụụrụ ndị nkụzi ha ise Baịbụl, ha ebido fewe Jehova.
^ para. 18 “Betel” pụtara “Ụlọ Chineke.” Ọ bụ ihe Ndịàmà Jehova na-akpọ alaka ụlọ ọrụ ha dị iche iche. (Jenesis 28:17, 19) Ndị na-eje ozi na Betel na-arụ ọrụ dị iche iche iji na-akwado ozi ọma Ndịàmà Jehova na-agbasa n’ụwa niile.